Nagu saabsan - Handan Zhanyu Fastener Co., Ltd.
Handan Zhanyu Fastener Co., Ltd. waxay ku taalaa aaga warshadaha ee tuulada dongmingyang, Degmada Yongnian, Magaalada Handan, Gobolka Hebei. Shirkaddu waxay daboolaysaa aag ka badan 20000 mitir murabac, oo leh raasamaal diiwaangashan oo ah 5 milyan yuan iyo in ka badan 220 shaqaale ah. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirkadda: boolida, lowska, barroosinka, Isqodida qoditaanka qafiska, qallajinta darbiga, hoos udhaca barroosinka, lowska baaldiga balaastigga ah, C-qaabeeya birta, dunta dunta, barroosinka xargaha iyo noocyada kale ee alaabta xirxiraha.
Shirkaddu waxay leedahay sannado badan oo wax soo saar ah iyo khibrad iib ah, oo leh xariiq shey oo dhammaystiran, tiknoolajiyad kormeer tayo sare leh, nidaamka xakamaynta tayada adag, koox xirfadlayaal ah oo injineero farsamo ah, si loo hubiyo tayada alaabooyinka heerarka oo dhan, waxay dhaaftay nidaamka tayada ISO. shahaado Tikniyoolajiyadda shirkadda iyo qalabkeeda waa la cusbooneysiiyaa maalinba maalinta ka dambeysa, waxaana si tartiib tartiib ah loo ballaariyay baaxadda wax soo saarkeeda Waxaa loo soo saaray shirkad fara badan oo shaqeyneysa oo isku dhafan farsamaynta farsamada, qalabka dhismaha, qaybaha gawaarida, qalabka korontada, iyo horumarka iyo soosaarida heerarka caalamiga ah Wax soo saar aad iyo aad u tiro badan ayaa loo dhoofiyaa suuqyo kala duwan oo dal iyo dibad ah.
Shirkadeena ayaa aaminsan caqiidada "badbaadin tayo, horumar adeeg". Guushayada ugu weyn ayaa ah inaan kasbano kalsoonidaada, si aan u noqono lammaanahaaga lagu kalsoonaan karo, si aan ugu guuleysano kalsoonida macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah aqoon xirfadeed iyo farsamo iyo ruuxa hal-abuurnimo joogto ah.
Shirkadda Zhanyu waxay gacmaha isula qabsan doontaa dhammaan shaqaalaha mustaqbalka si ay si daacad ah uguugu adeegto oo ay wadajir ugu abuurtaan dhalaal !!!
Degmada Handan City Yongnian Zhanyu Fastener Manufacturing Co., Ltd., oo leh qalab casri ah, nooca xinzhanyu.
La aasaasay bishii Diseembar 15, 2013, oo ku taal Mingyang Village Industrial Zone, Tiexi, Degmada Yongnian, Handan, Gobolka Hebei, shirkaddu waxay daboolaysaa aag ka badan 17000 mitir murabac, oo leh caasimad diiwaangashan oo ah 35 milyan yuan iyo in ka badan 120 shaqaale. Shirkaddu waxay leedahay in ka badan 10 sano oo soo-saaris iyo waayo-aragnimo iib ah, qalab casri ah, tirada hadda jirta ee aalado otomaatig ah oo otomatig ah, mashiinka foorarsiga qabow ee otomaatiga ah, mashiinka cinwaanka qabow ee xawaaraha sare leh, mashiinka lagu dhufto saxarka sare ee saxarada.
Taageero dhul gariir wanaagsan. Xullan Zhanyu